Website ay leeyihiin masuuliyiin sare oo ka tirsan Isbahaysigii lagu sameeyay Asmara oo ku dhow in uu taageeero dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Col. Nuur Cadde oo laga yaabo in loo magacaabo raisul wasaaraha DF kadib marki ay gacan siiyeen qaar ka tirsan haadaha caalamiga, madaxa Bisha Cas iyo Jeneraal Cabdinuur oo ay qaraabo yihiin madaxweyne Yuusuf. Ruunkinet 20/11/07
Shabakad ay leeyihiin masuuliyiin ka tirsan Isbahaysiga lagu sameeyay Asmara ee uu guddoomiyaha u yahay Sheekh Shariif Axmed ayaa ku dhow in uu taageeraan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Website-kan oo saldhigiisu yahay magaalada London ayaa sheegay in uu mudan yahay Col. Nuur Cadde in raisul wasaare loo magacaabo asagoo buuxiyay shuruudihii laga rabay raisul wasaaraha dowladda Cabdullahi Yuusuf.
Masuuliyiinta sare ee Isbahaysiga ayaa looga bartay in aysan aqoonsan doonin cid kasta oo la shaqeysa dowladda federaalka ama u shaqeysa horayna u sheegay in ay kuwaasi la dagaalami doonnaan.
Shabakadan oo hadalka sidan u qoray (Click) ayaan waxay dadbadani sheegayaan in ay dhabar jab ku tahay hadafka isbahaysiga ayadoo horay loo sheegay in Isbahaysigu ku jiraan dad kala dan ah.
Dhanka kale, wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo oo isa soo taraya ayaa sheegaya in mudane Nuur Cadde dhawaan loo magacaabi dooni raisul wasaaraha xukuumadda dowladda madaxweyne Yuusuf.
Arrintan ayaa la sheegayaa in ay ka dambeeyeen madax sare oo ka tirsan ICRC, Food Cadde oo ah madaxa Bisha Cas ee Soomaliya iyo Jeneraal Cabdinuur oo ay qaraabo yihiin madaxweyne Cabdullahi Yuusuf.
Col. Cadde ayaa horay ula soo shaqeeyay labadan masuul ayagoo ku kalsoon wax qabaddiisa sida ay sheegeen dad ku dhow dhow madaxweynaha.
Dhinaca kale, warar ayaa sheegaya in mudane Cali Mahdi Maxamed ay dhabar jab ku tahay arrintan maadaama uu asaga hore u keenay nin lagu magacaabo Xasan Sheekh oo haatan ku sugan magaalada Nayroobi laguna waday in uu noqdo raisul wasaaraha cusub.